अन्तिम बिदाईमा अनुहार हेरेर बिदाई गर्न पाउने अधिकार दिलाऔं | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अन्तिम बिदाईमा अनुहार हेरेर बिदाई गर्न पाउने अधिकार दिलाऔं
हाल दिन दिनै १०० भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरुको मृत्यु भैरहेको छ। केहि समयदेखि दिनै धेरै साथीभाई इस्टमित्रहरूले कोरोनाको कारण ज्यान गुमेको समाचारले अति नै स्तब्ध छु। त्यो भन्दा बढी विभिन्न संचारका माध्यमबाट मृत्यु हुनेहरूलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन जादा आफ्ना प्रियजनहरूको अन्तिम अनुहार हेर्न नपाई मृत शरीरलाई स्पर्श मात्र गरेर बिदाई गर्नु परेको देखेर मनमा असैह्रय पिंडाबोध भैरहेको छ ।
जब कसैको मृत्यु हुन्छ, अनुहार हेरेरै अन्तिम बिदाई गरिएता पनि आफन्त र साथीहरूले संसार छाडे कै हुन्, त भनेर विश्वास गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । तर, अन्तिम पटक अनुहार नै नहेरी बिदाई गर्नु पर्दा कति पिंडा हुन्छ । त्यो भोगेकाले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मैले गत हप्ता एक जना महिलाले कोरोनाको कारण मृत्यु भएका आफ्नो श्रीमानलाई विदाई गरेको अनलाइनबाट देखे जसलाई म नजिकबाट चिन्छु। उहाँ आफै पनि कोरोनासंग होम आइसोलेसनमा बसेर संघर्ष गरिरहनु भएको थियो। तर, जब उहाँको श्रीमान्‌को मृत्यु भयो उहाँ अन्तिम बिदाईको लागि अक्सिजन सहित हस्पिटलमा आउनु भयो ।
तर लाश पुरै पोको पारेको कारण उहाँले अनुहार समेत देख्न नपाई बारम्बार लाशलाई सुम्सुमाएर मात्र अन्तिम बिदाई गर्नु भयो। उहाँले श्रीमान्को अन्तिम अनुहार हेर्ने धेरै चाहना गर्नुभएको थियो,तर, हाम्रो सरकारी नियमले दिएन । म पनि अनलाइन बाटै भएपनि अन्तिम पटक उहाँको अनूहार हेरेर भएपनि बिदाई गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ । तर, त्यो अवसर मिलेन। हाम्रो छिमेकि मुलक भारतमा यस्तो चलन छैन ।
मैले हालसालै कोरोनाको कारण मृत्यु भएको एक भारतीय नागरिकको भिडियो हेरेको थिए जसमा उनका परिवारका सदस्यहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाई रहेका थिए तर, त्यो लासको मुहार देख्न सकिन्थ्यो किनकि मुख पटि त्यो लास प्याक गर्ने ब्यागमा प्लाष्टिक प्रयोग गरिएको थियो।
हाम्रो सरकार पनि यति कुरामा त संवेदनशील हुन पर्ने होइन र ? हुन त सरकारलाई जनताको यति गहिरो भावना बुझ्ने फुर्सद नै कहाँ होला र ? किनकि सरकार आफ्नै राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त छ।
यो पनि पढ्नुहोस पत्रकारितामा झनै भ्रस्टाचार छ, यहाँ पनि छन बिदेशी एजेन्ट देखी तेत्तिस किलो सुन वाला सम्म !
सक्दो सेयर गरेर यस विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर कमसेकम अन्तिम बिदाईमा मृतकका परिवारलाई आफ्ना प्रियहरूको अनुहार हेरेर बिदाई गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्न सहायता गरौ।
१२,जेष्ठ.२०७८,बुधबार ०७:५६ मा प्रकाशित
← भारतबाट सिंगापुर जान लागेको पानीजहाजमा भीषण आगलागी,चालक दलको उद्धार
भारतको जमिनमा पुग्दैछ यास आँधी आज , नेपालमा शनिबारसम्म प्रभाव →